Iràka: Manomboka ny andron’ny fahatezerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2011 4:33 GMT
Androany dia manamarika ny andro ny fahatezerana ao Iraka satria Irakiana an-jatony no nidina an-dalambe mba hitaky fanovana sosialy sy toekarena ary ny fanafoanana ny kolikoly. Na ny mpanohana ny fiovana na ny mpanohana ny fanavaozana na ireo mpanohitra ny governemanta dia nivory manerana an'Iraka androany maraina, mba hifanehatra amin'ny herisetran'ny polisy, ny tsy fahafahan'ny mpanao gazety manao ny asany sy ny famaizana ataon'ny governemanta, dia nanamafy ny firaisankinanay hatrany.
Eo ho eo amin ny 100 eo ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny masoivoho Irakiana ao Londres mba hitaky fanjakana demokratika vaovao ary ny fanafoanana ny Malaki. Sarin i Ian Marlow, zon ny mpamorona (25/02/11).
Sombitsombi-tantara tao amin'ny tweets, izay miresaka momba ny fahafatesana sy ny faharatrana, herisetran'ny polisy manoloana ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny tsy fahampian'ny fiarovana, toy ny mpanao gazety voan'ny hetraketraka, nosamborina ary ny fakàna ny fitaovany.
Mahareta hihaino ny fitantarana momba ny Iraka [teny Anglisy].
[View the story “Iraq #Feb25″ on Storify]